Madaxweyne dalkiisa u dalbay dhir uu sheegay in lagu daweeyo Coronavirus 2 Saacadood ka hor La wadaag qodobkan Facebook La wadaag qodobkan WhatsApp La wadaag qodobkan Messenger La wadaag | Berberanews.com
Home WARARKA Madaxweyne dalkiisa u dalbay dhir uu sheegay in lagu daweeyo Coronavirus 2...
Madaxweyne dalkiisa u dalbay dhir uu sheegay in lagu daweeyo Coronavirus 2 Saacadood ka hor La wadaag qodobkan Facebook La wadaag qodobkan WhatsApp La wadaag qodobkan Messenger La wadaag
Madaxweynaha Tanzania, John Magufuli, ayaa sheegay inuu dawo dhireed la sheegay inay daweyso cudurka Covid-19 uu ka soo dhoofsan doono dalka Madagascar. Hay’adda caafimaadka adduunka ayaa haseyeeshee sheegtay in ilaa iyo hadda aan la helin dawo lagu dabiibo fayraska.
Tanzania ayaa shaacisay in dad tiradoodu ka yartahay 500 oo qof uu dalkaasi ku dhacay cudurka. Hase yeeshee mucaaradka ayaa sheegay in dowladdu ay qarinayso xogta faafidda cudurka maadaama saddex xildhibaan ay dhawaan u dhinteen xaaladdo aan caddeyn.
Madaxweyne John Magufuli ayaa sheegay inuu diyaarad u diro doono dalka Madagascar si halkaa uu uga soo dhoofsado sharoobo dawo dhireed ah oo la sheegay inay waxtar u leedahay dadka uu ku dhaco fayraska Corona.
” Wadahdal ayaa inoo socdo Madagascar, waxay ii soo direen warqad ay ku leeyihiin dawo ayaan u henay coronavirus. Waxaan direynaa diyaarad inoo keenta dawadaasi si ay Tanzania uga faa’iideysato. Dowladdu habene iyo maalinba way shaqeyneysaa”, ayuu yiri Magafuli.
Ma aha madaxweynihii ugu horreeyay ee Afrikaan ah ee tallaabadan qaada, waxaana dalabkan uga horreeyay hogaamiyayaasha Jamhuuriyadda Congo iyo Guinea Bissau. Hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa uga digtay dadweynaha isticmaalka dawooyin aan la hubin.
Madaxweyne Magufuli oo si toos ah shacabkiisa ugala hadlayay telefishinka ayaa dhanka kale shaki geliyay kalsoonida lagu qabi karo qalabka lagu baaro cudurka Covid-19.
Waxa uu sheegay in dheecaanno laga qaaday shimbir, ri’ iyo khudrad loo diray sheybaarka Corona, balse dhammaantood la sheegay inay qabaan fayraska.
Magafuli ayaa shacabkiisa ugu baaqay inaysan cabsanin oo ay hawlahoodii cadiga ahaa iska wataan.
Qaar ka mid ah xubnaha baarlamaanka ayaa sheegay inaysan tagi doonin kalfadhiyada iyagoo sabab uga dhigay in seddax ka mid ah saaxibadood ay u dhinteen xannuun aan la ogeyn waxa uu yahay. Balse Magafuli ayaa u digay xildhibaanadaasi waxa uuna sheegay inaysan mishaar qaada doonin hadii ay shaqada imaan waayaan.
Previous article“waxa ina soo galay col aanad arkaynin oo hubkiisa aanad arkaynin” Madaxweyne Biixi
Next articleKuuriyada Koonfureed iyo Kuuriyada Waqooyi oo rasaas is weydaarsaday